Famatsian-jiro mpamonjy hain-jiro manokana - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Famatsian-jiro manokana famonoana afo maika
Famatsian-jiro manokana famonoana afo maika
1. Fahita amin'ny fiparitahan'ny capacitor C6 (circuit fohy) na fampihenana tsindry (fahatapahana malefaka), dia tokony hosoloina tsindry ambonin'ny 1kV sy ny polyester avo lenta avo lenta polyester na CBB capacitor.
2. Sokafy ny filamenta jiro. Raha ny jiro dia tsy tongotra mainty jiro matotra tapaka miaraka amin'ny 0. 047 Î¼ F / 400V polyester capacitor fampiasana vonjy maika.
3. Open circuit na hanovana ny sandan'ny R1, R2 (R1 tsy fahombiazana azo inoana kokoa), ny fanoloana 1 / 4W kalitao avo sy fanoherana ny fanoherana.
4. Transistor open circuit. Raha transistor iray monja no misokatra fa tsy afaka manolo iray, ary tokony hosoloina isaky ny voltre 400V na mihoatra ireo karazana switch mifangaro. Raha tsy izany dia mora mihodina jiro na mandrehitra fantsona indray.
5. Jiro mirehitra. Jiro tsy misy mainty matotra, zahao raha D5, D6, serira mangatsiaka iraisana na misokatra, raha D5, D6 malefaka tapaka na ratsy sivana capacitor C1 leakage ary koa hanao ny jiro flash.
6. Jiro mankany amin'ny hazavana, indraindray ny mikasika ny jiro dia mety ho maivana na hazavana mihodinkodina, mety tsy ho ampy amin'ny C3, C4, fa tsy mifanandrify.
7. Raha jiro jiro mena na jiro mirehitra jiro mena na jiro mirehitra jiro kely fotsiny ny jiro kely kely, dia tokony hanamarina ny fahatapahana malefaka D1 ~ D4 koa ianao, hametraka miverina C1, na famoahana, faribolana fohy famatsiana herinaratra.
:Fanohanana vonjimaika amin'ny jiro fluorcent LED